Agenda iji kwadebe mmegide na-aga nke ọma na 2022 ▷ WILL GA-agabiga! | Nhazi na ọmụmụ ihe
I kpebiri amụ mmegide. Ya mere, anyị enweela nghọta doro anya banyere ọdịnihu anyị. Ma ugbu a, akụkụ ọzọ dị mkpa bụ nke na-ahọrọ otu. Anyị kwesịrị ịnwe ụdị ọrụ a na-agwa anyị ngalaba ga-adọta. Na mgbakwunye na nke a, chee echiche banyere aha ndị anyị nwere, n'ihi na dịka anyị maara nke ọma, ọ bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa.
Ozugbo anyi bu n’obi banyere mmegide nke masịrị anyị ma ọ bụ nke na-akpali anyị, ọ dị anyị mkpa ịzụta atụmatụ ahụ. Anyị nwere ike ijide ya ugbu a, yabụ n'okpuru ị ga-ahụ usoro nyocha nke asọmpi nwere ọtụtụ ohere inweta ọrụ ugbu a.
Kasị choro asọmpi
Ebumnuche Post Office
Ndị na-agbanyụ ọkụ na-emegide
Ndị nche obodo na-emegide
Ebumnuche ndị nchekwa obodo
Mmegide nke Ikpe Ziri Ezi
Ebumnuche ikpe ziri ezi
Ndị nche obodo na-emegide: Otu n’ime asọmpi a na-achọkarị bụ ndị nchekwa obodo. Ndị ọrụ nchekwa na-esokarị bụrụ ndị a na-arịọkarị. Mmegide nke ihe ndị dị mkpa bụ inwe aha ESO, bụrụ afọ 18 ma ọ bụghị karịa 40. A na-ekewa ule gị na ule anụ ahụ (ọsọ, ntachi obi, igwu mmiri ...) na akụkụ usoro (Spelling, asụsụ, psychotechnics and personal Ajụjụ ọnụ).
Oguzogide ndi oku oku: Iji nwee ike chee onwe gị na asọmpi ọkụ ọkụ a, ịchọrọ nzere bachelọ ma ọ bụ ihe nhata, yana ịbụ afọ 16. A na-enyocha ule a site na usoro ihe atụ na akụkụ bara uru (pedọ eriri, ibuli elu, ntinye aka, ịgba ọsọ, igwu mmiri na ịwụ elu). The psychotechnics na ọgwụ na ahụ ike ule mezue akụkụ na-aghaghị imeri. Ozugbo inwere ebe gi, i gha aru oru di iche iche dika igbapu, ihe mberede ma obu oku oku.
Mmegide SAS (Ọrụ Ahụike Andalusian): N'ebe a, anyị ga-enwe ọtụtụ ọnọdụ na nke ọ bụla n'ime ha ga-enwe ihe ha chọrọ n'ụdị ogo. N'ime ha niile anyị na-eme ka nlekọta, usoro, ndị na-ere ọgwụ ọgwụ ma ọ bụ ndị na-ahụ maka ọgwụ, na ndị ọzọ pụta ìhè. Banyere ule ahụ, ọ ga-abụ akụkụ nke usoro iwu na usoro bara uru, na-echezọghị asọmpi asọmpi ahụ, ebe a ga-agbakwunye uru ndị a nwetara.
Ziga mmegide: Dị ka ihe achọrọ, ị ga-achọ ogo ESO ma ọ bụ ihe ya na ya ruru afọ 18. Maka ule ahụ, ị ​​ga-agafe ule a na-akpọ nke a na-ahụkarị na nke abụọ, ebe psychotechnics bụkwa protagonists. N'ime asọmpi ndị a, anyị ga-ahụkwa ọnọdụ dị iche iche (onye isi, onye ọrụ gọọmentị, ọkwa, ndị nkedo ma ọ bụ ndị na-enyere aka). Na mgbakwunye, ha nwere Job Bank nke na-enye gị ohere ịnweta ọrụ dị iche iche ka anyị na-echere ebe anyị.
Ikpe ziri ezi na-emegide: N'ime mmegide nke ikpe ziri ezi anyị hụrụ ozu atọ dị iche iche. Usoro Nchịkwa maka nke achọrọ diplọma ma ọ bụ akara mmụta mahadum, mgbe ahụ anyị nwere usoro Usoro Nhazi ebe achọrọ nzere bachelọ. N'ikpeazụ, ahụ nke Enyemaka Ikpe maka ya dị ogo ogo nke ESO ma ọ bụ ihe yiri ya. Ozugbo akwadoro mmegide gị, ị ga-enwe ike ịnweta nkwalite dị n'ime. Ọrụ ndị a ga-arụ dịtụ iche, mana ha niile na-arụ ọrụ n'etiti ndị ọka iwu na ụlọ ọrụ ikpe.
Uru nke ịbụ onye ọrụ bekee
Gọọmentị ọha na eze na-enye ọrụ, nke ọtụtụ mmadụ na-akwadebe maka ọnwa ma ọ bụ afọ. Mgbalị dị ukwuu nke kwesịrị ya, ebe ọ bụ na ozugbo mmegide gafere, anyị ga-enwe ọtụtụ uru nke ịbụ ndị ọrụ obodo.
Nche nke ọnọdụ na-adịgide adịgide: Ọrụ bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ anyị. Ekele dịrị ya, anyị ga-enweta ụgwọ ọnwa nke ga-enyere anyị aka ibi ndụ ntụsara ahụ ụfọdụ. Yabụ ịbụ onye ọrụ bekee na-egosi nchekwa ahụ. N’ọnwa ọ bụla, a ga-akwụ anyị ụgwọ ọnwa, gbakwunyekwa ego ole kwa afọ. Na mpaghara a, nkwụsị anaghị adịkarị, n'ihi na ị nwere ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ ruo mgbe ị ruru afọ ezumike nká.
Ezumike kwesịrị ekwesị: Ọrụ niile ga-agụnye oge ezumike. Ọ bụ eziokwu na ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị, na-adabere n'ụdị ọrụ. Na mgbakwunye, n'ọtụtụ ọnọdụ, ụbọchị ezumike fọdụrụnụ belatara nke ukwuu. Yabụ uru ọzọ nke ịbụ onye ọrụ bekee na-enwekwu ụbọchị ezumike.
Nhazi oge: Ọ bụ eziokwu na ị ga-asọpụrụ usoro ihe omume, maka nbanye na ụzọ ọpụpụ. Ma na nke a, obughi mgbe ka ịnọ n ’otu aka karịa oge ikwesiri. Ọ bụ ezie na n'ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ, anyị nwere ọchụnta nke ịgwa anyị na anyị ga-emecha ụdị akwụkwọ ọzọ. Na mgbakwunye, na imerime ụlọ ahịa, ị ga-enwe ezumike ị haveụ kọfị.
Melite ikike ndị ọrụ: N’enweghị mgbagha, ikike onye ọrụ nwere nnukwu mgbanwe n’etiti ndị ọrụ bekee. Okwu ndị dị ka ezumike nká yana onyinye, wdg, bụ ihe edozi ma na-akwanyere ùgwù mgbe niile.
Nyefee zoo: Ọ bụ eziokwu na ọ bụkwa nnukwu uru maka imirikiti ọkwa enyere. Nke ahụ bụ, ị ga-enwe mmegharị ọdịdị ala, ọ bụrụ na-ịchọrọ. Ọ bụ ezie na ọ gaghị abụ site na mkpịsị aka, kama site na usoro mgba. Ikekwe maka ndị nkuzi ọ dịtụ mgbagwoju anya karị, mana enwere ike iwere ya dị ka ezigbo elebara anya.
Typesdị nke mmegide ma ọ bụ ndị ọrụ ọha enwere naanị anọ, dabere na ihe achọrọ, ọrụ ahụ n'onwe ya na ọnọdụ.
Onye ọrụ ọrụ: Anyị na-amarakarị ya naanị dị ka onye ọrụ bekee. Ọ bụ onye e jikọtara ya na Nchịkwa Ọha. Nke ahụ bụ, ọ bụ ebe a kwụchiri ya mgbe ọ gafesịrị mmegide ma nweta ebe. N'ime ụdị ndị ọrụ a, anyị na-ahụ ọkwa, dịka aha achọrọ ka ha si dị.
Otu a: Otu nke mbu nwekwara ike kewaa A1 na A2. N'ime ha abụọ, ị ga-achọ ogo mahadum iji nwee ike itinye akwụkwọ maka ọnọdụ ndị a.
Otu b: Iji nweta mmegide nke Group B, ịchọrọ aha ndị ọkachamara.
Otu C: N'ebe a, anyị ga-ahụkwa ihe a na-akpọ C1. N'ime ha, achọrọ nzere bachelọ, ebe maka C2, achọrọ gụsịrị akwụkwọ na ESO.
Ndị na-arụ ọrụ ọchịchị: N'agbanyeghị na edozigoro ndị mmegide ahụ, ọ dị iche na nke gara aga n'ihi na ọrụ ya ha anaghị akwụsi ike. N'ezie, ọrụ nke ọrụ ha ga-arụ ga-adị ka nke ndị isi ọrụ. Mana ndị na-eme nwa akwụkwọ na-apụta mgbe enwere oke ọrụ ma ọ bụ na enwere ohere ụfọdụ ga - ejupụta ma ọ bụ na ọ ga - anọchi ya.
Ndị ọrụ na-arụ ọrụ: Ha nwere nkwekọrịta nke sitere na Nchịkwa Ọha. Nkwekorita ekwuru nwere ike ibu ebighi ebi, na-adigide ma obu oge.
Nwa oge mkpara: N'okwu a anyị na-ekwu maka ọrụ a na-achọkarị maka ndụmọdụ na dị ka aha ya na-egosi, ọ bụ nwa oge.
Achọrọ m ịmụ mmegide, otu esi amalite?
Ndị a bụ usoro ndụmọdụ iji bido ịmụ mmegide ma ghara ịnwụ ịnwa:
Ga-enwerịrị ụfọdụ oge awa ọmụmụ. N'ihi na ihe ndị a na-eme na-abụkarị ihe ndabere na nke na-akpali ahụ anyị.
Bido mụwa nke nta nke nta. Cheta na mmegide na-ewe oge, ọ ka mma iji nwayọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ nsonaazụ dị mma. N'ezie, na nke a, onye ọ bụla nwere ike isetịpụ ihe mgbaru ọsọ ya. Ọ dị mma ịmalite site na obere oge, naanị nkeji ole na ole mana etinye uche gị nke ọma. Itinye uche n'ihe bụ isi ihe na-enyere ezi mmụta aka.
Na-echeta mgbe niile gị mkpali. Ọ bụrụ na ị bịarutere ebe a, o kwesịrị ịbụ n'ihi na i chebarala ya echiche, ị tụgharịrị uche n'ezi ihe na ịgafe mmegide ga-ahapụ gị. Yabụ mgbe ọ masịrị gị, cheta mkpali ma jiri anya nke uche hụ ihe mgbaru ọsọ.
Echegbula ma ọ bụrụ na otu isiokwu esoghị gị dị ka ị tụrụ anya ya. Maka na ọ bụrụ n ’ilekwasị anya naanị n’isiokwu a, ị ga-egbu ọtụtụ oge wee merie. Ọ bụghị okwu niile ga-esi ike, achọla ọtụtụ ihe nwere ihe ngwọta.
Ndị mmegide ahụ dị ka a ga-asị na ọ bụ ọrụ. Ọ bụ eziokwu na na mbu, anaghị akwụghachi ya ụgwọ, mana anyị ga-ewere ya otu ahụ. Emela ka iwe ju gị obi na mgbanwe mbụ, hazie onwe gị ma jubiga oke oke.
Enwere ndị na-amalite na-amụ ihe dị ka awa atọ n'ụbọchị n’ime ọnwa mbụ. Mana dịka anyị gosipụtara, enwere ike ịgbaji, mana ọ na-etinyekarị uche gị. N’ọnwa na-eso ya, i nwere ike ịgbatịkwu ụbọchị ọmụmụ ihe gị.
Oge niile, ọ naghị afụ ụfụ ime ihe mock exam ụdị. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ụfọdụ kọntaktị na ihe ị ga-ahụ mgbe nnukwu ụbọchị ahụ ruru, ị ga-etinyekwa ihe ọmụma gị n'ule ahụ.
Cheta na ọ ga-adị mma ka ị gụọ ụzọ, wee mata ihe kacha mkpa ma mee nchịkọta iji dozie echiche ndị ahụ.
O siri ike ịgafe mmegide?
Ọ bụghị ajụjụ dị mfe ịza. Karịa ihe ọ bụla n'ihi na n'ime ihe isi ike, e nwekwara isi ihe dị iche iche. Otu n'ime ha bụ ụdị mmegide nke anyị na-eweta onwe anyị, yana oke ya n'ime Otu A, B ma ọ bụ C. N'aka nke ọzọ, a ga-enwe oge anyị nyefere, ebe ọ na-ewe nnukwu ntachi obi na ịrụ ọrụ , yana nzukọ.
Maka ihe a niile, a ghaghi iburu n'uche na otutu ndi mmadu na eji otutu afo tupu inabata ya. Mana ọ bụ ihe niile banyere ịda mbà, ilekwasị anya n'ihe mgbaru ọsọ na ịga ya. Ọbụna na obere nzọụkwụ, ma ị nwere ike mgbe niile. Anyị na-achọta ihe akaebe nke ụdị dị iche iche, ebe ụfọdụ na-achikota na ọ gbagwojuru anya, ebe ndị ọzọ ahụbeghị ya dịka akọwara ya. Yabụ dị ka anyị na-ekwu, ọ ga-adabere na onye ahụ, usoro ọrụ ha na mkpebi ha.
Ego ole ka gọọmentị na-ana
El ụgwọ ọnwa onye ọrụ gị Ọ bụ ndị ị megidere ya kpebiri ya. Mana na mgbakwunye, agbakwunyere ụfọdụ ihe ndị ọzọ dịka ebe njedebe ma ọ bụ ogologo oge na ọnọdụ. Mana o siri ike inweta ụgwọ ọnwa ndị a:
Otu A1: Salarygwọ ọnwa gị kwa ọnwa karịrị euro 2.800. Ndị otu a bụ ndị nyocha maka ndị ọrụ, nchekwa mmadụ, ego ma ọ bụ ndị otu dị elu nke Gọọmentị Steeti.
Otu A2: Na nke a, ụgwọ ọnwa na-adaba na euro 2.200 kwa ọnwa na ụgwọ abụọ ọzọ. N'ime otu a, anyị nwere ike ịchọta ndị ọrụ nchịkwa maka nyocha, ego ma ọ bụ njikwa usoro, yana teknụzụ ozi.
Otu b: Ọ bụrụ na ị nwere ọkwa nka na ụzụ dị elu, ị ga-enwe ike ịnweta otu a. Banyere ụgwọ ọnwa ya, ọ ga-eru ihe dịka euro 1.800.
Otu C1: The ndutịm ahu na-emekarị nsogbu na otu a. Iji tinye akwụkwọ, ị ga-achọ nzere bachelọ. Gwọ ahụ dị n'etiti euro 1.600.
Otu C2: N'ebe a, anyị ga-ezute ahụ inyeaka, nke dịka ihe dị mkpa ga-achọ aha ESO. Ha ga-akwụ ụgwọ ihe ruru euro 1200.
Otu E: Ndị na-eto eto pere mpe ga-enwe ụgwọ ọnwa ruru euro 1000.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na m daa ule maka mmegide ahụ?
Ọ bụ eziokwu na mgbe oge niile nọrọ, mgbalị ahụ, ịhụ na ọ kwụsịtụrụ bụ nnọọ ihe nkoropụ. N’ihi ya, anyị kwesịrị ịgbalị ịnabata ihe merenụ, ọ bụrụgodị na ọ dịrịghị anyị mfe. Followingbọchị ndị na-eso ya, ọ ga-adị mma ka ị zuru ike ma kporie ndụ. Ọ bụ oge inye onwe anyị oge iji tụgharịa ma chefuo ihe niile dịka o kwere mee.
Ikwesiri ile anya n'akụkụ dị mma. Maka na ihe niile a gbasara ịmụ ihe na oge ọbụla anyị ga-eru nso na ebum n’obi anyị. Nke na-agbakwunye ahụmịhe ọzọ maka oge ọzọ anyị ga-egosi. Otú ọ dị, kwụsịtụ nnyocha nke ndị mmegide, Ọ bụghị ọgwụgwụ. Ọ bụ ụzọ iji nwee ike ịchọpụta njehie ma melite usoro iji were ule na-esote n'ụzọ ka mma.